Accueil > Gazetin'ny nosy > Fahaizan’ny mpitondra : Ny ady amin’ny fahantrana no hitsaràna azy
Fahaizan’ny mpitondra : Ny ady amin’ny fahantrana no hitsaràna azy
Mirehareha ny mpanao politika sy ireo olom-pirenena mpanohana ny fitondrana fa mpitondra tena mahavita azy ny filoha Andry Rajoelina sy ireo mpiara-miasa aminy. Tohan-kevitra entin’izy ireo hiarovana izany hevitra izany ny fahamaroan’ireo fotodrafitrasa vita tao anatin’ny roa taona sy tapany nijroan’ity fitondrana ity, ao anatin’izany ny toeram-pitsaboana, sekoly ary kianja manara-penitra nantsangana manerana ny Nosy. Maro amin’ireo mpanao politika miara-dia amin’ny fitondrana aza no milaza mihintsy fa tsy mbola nisy filoha tahaka an’i Andry Rajoelina teto Madagasikara raha ny fampandrosoana firenena no resahina.
Ny fahavitana fotodrafitrasa maro no hitarafana ny fahaizan’ny mpitondra ho an’ireo mpanohana ny fitondrana, kanefa raha aty amin’ny an-dalam-pandrosoana na mahantra tahaka an’i Madagasikara dia ny ady amin’ny fahantrana no tena hitsarana ny fahaizan’ny mpitondra iray. Samy nahavita fotodrafitrasa avokoa ny fitondrana rehetra nifandimby teto amin’ny firenena, raha tsy hiresaka afa-tsy ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina, saingy ny hita miharihary aloha dia niha-nahantra hatrany ny Malagasy tao anatin’ny 61 taona niverenan’ny fahaleovantena, ary manaporofo izany ny tatitra sy ny tarehimarika havoakan’ny Banky iraisam-pirenena. Na tsy mijery ny tarehimarika aza fa ny zava-misy eny anivon’ny fiarahamonina rehetra eny dia azo hitarafana ny fitontongan’ny fari-piainan’ny vahoaka Malagasy.
Rehefa mihena ny tahan’ny fahantrana, mitombo ny fahefa-mividin’ny mponina ary mihakatra ny IDH (Indice de développement humain) vao azo lazaina fa tena mandroso ny firenena iray. Izany no hita any amin’ireo firenena lazaina fa misandratra, toy ny any amin’ireo firenena atsimo atsinanan’i Azia, Rwanda, Angola, Ethiopie, Nosy Maorisy, sns sns. Tsy azo lazaina ho mahay mihintsy ny mpitondra iray raha mikoroso fahana sy latsaka any fahatrana lalina ny vahoaka ao aminy, na maro aza ny fotodrafitrasa vaovao mitsangana isaky ny distrika.